तारिफ बटुल्दै ऋतिक र टाइगर – Khabar Silo
काठमाडौँ । प्रखर वक्ता तथा गायक रमेश प्रसाईको स्वर रहेको ‘अरबको खाडीमा’बोलको गीतको भिडियो २ लाख बढी दर्शकले हेरेका छन् । भिडियो रिलिज भएको छोटो समयमा नै दर्शकले राम्रो प्रतिक्रिया दिँदै २ लाख बढीले हेरेर साथ दिनुभएको भन्दै गीतकार प्रेम चौलागाईले बताए । रोजगारीको सिलसिलामा विदेश उडेको युवाको कथा र पूर्वेली भाका समेटिएको ‘अरबको खाडीमा’बोलको […]
सुदूरपश्चिम धनगढीकी दुलही टिकटकमा भाइरल, को हुन् त यी हँसिली चेली ?
धनगढीः ‘पर्सी आइहाल्न्या हुँ खिरपुरी बनाइराख्नु। अचार पनि, धेरै खान्या हुँ। हिजो कम खाँ हुँ नि मैले ! धेरै खान्या हुँ। नरुनु।’ दुलहीले कारबाट आमालाई सम्झाउँदै भनेको यो भिडियो अहिले निकै चर्चामा आएको छ। ‘विचार गरेस् है आफ्नो। आफ्नो शरीर स्वस्थ एपछि मात्र सबै चिज हुन्छ है। ख्याल राख्नु।’ सोही भिडियोमा दुलहीको गाला सुम्सुम्याउँदै आमाले […]